Izinja zibingelela kanjani? | Izinja Umhlaba
Indlela yokubingelela izinja enayo ihlukile, futhi kuya ngolimi lomzimba eziluthathayo, "ababingelelayo" baziphatha ngandlela thile; okusho ukuthi, angabanaki noma, kunalokho, yisiphi isenzo kamuva bonke abaqala ukudlala futhi bazijabulise.
Kodwa, Izinja zibingelela kanjani? Ukwazi impendulo yalo mbuzo kubaluleke kakhulu ebudlelwaneni babantu nezinja ukuthi buhle kusukela ekuqaleni, ngoba uma kungenjalo kuzosithatha isikhathi eside ukuthi bakuthembe.
1 Babingelela kanjani?
2 Yiziphi izimpawu abazisebenzisayo?
3 Ungazigwema kanjani izinkinga?
Izigaba ezilandelwa yizinja lapho zibingelela zilandelayo:
Indlela: imvamisa ukudweba ijika, ngoba ukube bebesemgqeni oqondile bangasongela abanye futhi kungaqubuka impi.
Ukuhlolwa: lapha kunuka iphunga lomzimba futhi, ngawo, ama-pheromones. Ngibonga kubo ukuthi bangazi yini ukuthi "ababingelelwayo" basemshinini, bezolile, benovalo, ukuthi baphile kanjani, ... kahle, kuba sengathi benza ukuhlaziywa okuphelele kokuziphatha kwabo nenhlalakahle yabo ngokumane nje benuke kubo.
Ukusabela kokuthunyelwe- Ngemuva kwalokho, uma sebehloliwe, bangahle bafune ukudlala noma basendleleni.
Isikhathi sezigaba sizoxhomeka kakhulu ekutheni zinjani futhi, futhi, ekujaheni komuntu ukuzithatha. Kwesinye isikhathi kuzoba yimizuzwana nje, kepha kwesinye isikhathi kuzothatha imizuzu eminingana.
Yiziphi izimpawu abazisebenzisayo?
Izinja zinokuthula ngokwemvelo futhi ingxenye enkulu yingoba zisebenzisa izimpawu zazo ezizolile ukugwema izingxabano. Lapho bebingelela, basebenzisa ezinye zalezi zimpawu, njengalezi:
Dweba ijika: Njengoba sishilo ngaphambili, ukuya ngqo enjeni kuwuphawu lokusongela, ngakho-ke badweba ijika ukuze lizizwe lingcono.
Hamba kancane: ikakhulukazi uma bebona ukuthi basondela enjeni engavikelekile, noma uma bona ngokwabo bengazethembi ngokuphelele, bazonciphisa izinyathelo zabo.
Jikisa ikhanda: ukusho ukuthi kukhona abangakuthandi.
Bend: ngaleyo ndlela basho ukuthi bazizwa behle, nokuthi bafuna ukuzwana naye.
Kunuke umhlabathi: Kuyindlela yokugwema izinkinga futhi, ngeshwa, ukwehlisa imvelo.
I-Sentarse: uma bebona ukuthi enye inja ayiqinisekile, bangakhetha ukuhlala buqamama naye ngenkathi begcina amabanga abo.
Ngeminye imininingwane ngalesi sihloko, ngikweluleka ukuthi ufunde incwadi kaTurid Rugaas ethi "Ulimi lweCanine: izimpawu zokuzola."
Ungazigwema kanjani izinkinga?
Abantu abaningi bavame ukuzivikela ngokweqile izinja zabo, ikakhulukazi uma zincane, okuyiphutha lokho. Bayabaphoqa ukuba bahlale phansi, bajike, babacoshe, bafuna ukunakwa kwabo… futhi konke lokhu kunengcindezi enkulu, okwenza isimo sibe sibi kakhulu. Ingabe kukhona okungenziwa ukukugwema? Kunjalo!
Noma ngabe zikhululekile noma ziboshiwe kufanele siqaphele ulimi lomzimba wazo, indlela abaziphatha ngayo, futhi ufunde kubo. Ngaphezu kwalokho, kubaluleke kakhulu ukuthi singabaphazamisi, futhi siqaphele wonke umuntu, ikakhulukazi ngezinja ezindala nemidlwane.
Uma kwenzeka beboshiwe, sizobabeka amahanisi entofontofo kubo futhi ngeke sidonse ibhande ngaphansi kwanoma yimuphi umqondo. Uma bethuka kakhulu, singaphenduka kodwa sibaqondise kabusha ngezibambo esizobanika zona lapho bezolile. Ngaphezu kwalokho, awudingi ukuphoqa ukuhlangana: bazokwazi kangcono kunathi uma enye inja izokwethenjelwa noma cha. Kufanele ubanikeze isikhala sabo ukuze bakwazi ukuxoxa futhi bajabule.
Njengoba ukwazi ukubona, ukubingelela izinja kuyisiko elibaluleke kakhulu kubo. Ngiyethemba le ndatshana ibilusizo kuwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Izinja zibingelela kanjani
Ukubaluleka kwamaprotheni ezinjeni